आज विश्व क्षयरोग दिवस: रोगभन्दा रोगीलाई हेर्ने दृष्टिकोण जटिल बन्दै | suryakhabar.com
बिपी कोईरालाको नीति आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिकः नेता भण्डारी
लोकतान्त्रिक मान्यतालाई कटौती गर्ने गरी विधेयक ल्याइएमा सडक र सदनबाट आन्दोलन गर्छौः सभापति देउवा
महामानव विपी कोईराला अनि नेपालको लोकतन्त्र र शाहीत्य
Home स्वास्थ्य आज विश्व क्षयरोग दिवस: रोगभन्दा रोगीलाई हेर्ने दृष्टिकोण जटिल बन्दै
on: March 24, 2019 In: स्वास्थ्यTags: No Comments
काठमाडौँ । ‘निरोगी छु, मलाई क्षयरोग नहुन सक्छ ।’ तपाई अनुमानमा हुनुहुन्छ ? ढुक्क नहुनुहोस् । हाम्रो शरीरमा क्षयरोगको किटाणुको जोखिम रहेको हुन्छ । यसरोगका किटाणु निष्कृय र सक्रिय दुई प्रकारका हुन्छन् । शरीरमा रहेको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताले निष्क्रिय क्षयरोगको कीटाणुलाई सक्रिय हुन दिइरहेको हुँदैन । तर सक्रिय क्षयरोगको कीटाणुले क्षयरोग लाग्ने गर्छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार नेपालमा निष्क्रिय क्षयरोग भएका १०० मध्ये १५ लाई भविष्यमा सक्रिय क्षयरोग हुनसक्छ । राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक चिकित्सक भीमसिंह तिंकरी भन्छन्, “हामी अधिकांश क्षयरोगको जोखिम समूहमा नै छौँ, रोग छैन भन्ने अवस्था रहँदैन ।” चिकित्सकका अनुसार निष्क्रिय क्षयरोगको उपचार गरेमा भविष्यमा सक्रिय क्षयरोगमा परिणत हुने सम्भावना न्यून रहन्छ । विशेषगरी रगत, खकार, छाला परीक्षणबाट सक्रिय क्षयरोगको कीटाणुको अवस्थाका बारेमा पत्ता लाग्ने गर्दछ । छातिरोग विशेषज्ञ चिकित्सक सरोज ढुङ्गानाका अनुसार शरीरको तौल घट्ने, सुक्खा खोकी लागिरहने, राति ज्वरो तथा पसिना आउने सक्रिय क्षयरोगका लक्षण हुन् ।
यस्ता व्यक्तिले खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा श्वासप्रश्वासका माध्यमले कीटाणु हावामा फैलिन सक्छ । हावामा फैलिएका अति सुक्ष्म जीवाणु स्वस्थ्य व्यक्तिमा सर्न पुगी क्षयरोगको सङ्क्रमित हुनसक्छ । यसैबीच क्षयरोग बारेमा जनचेतना जगाउन ‘समय अबको, क्षयरोग अन्त्यको’ भन्ने नाराका साथ विश्व क्षयरोग दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम आयोजना गरी आज मनाइँदैछ ।
क्षयरोगको उपचार प्रक्रियामा नआएका बिरामी पत्ता लागाई उपचारमा ल्याउनु स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रमुख चुनौती बनेको छ । केन्द्रका निर्देशक चिकित्सक तिंकरी भन्छन्, “अहिले स्थानीय निकायबाट क्षयरोगका बिरामीको तथ्याङ्क उपलब्ध हुनसकेको छैन । महिलाले स्वास्थ्य परीक्षण कम गराउने र टाढाबाट आउने भएका कारण धेरै महिला क्षयरोग कार्यक्रमको दायरामा समावेश हुनसकेका छैनन् । औषधि वितरणमा समेत समस्या परिरहेको छ ।”
नयाँ क्षयरोगीका १३ हजार बिरामी पत्ता लगाई उपचारको पहुँचमा ल्याउन सकिएको छैन । “क्षयरोगी किन सरकारी उपचार सेवामा आएनन् ? क्षयरोगी पत्ता लगाई उनीहरुलाई सरकारी उपचार सेवामा ल्याउन प्रमुख चुनौती बनिरहेको छ”, निर्देशक चिकित्सक तिंकरी भन्छन् ।
अर्कोतर्फ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार कूल क्षयरोगीमध्ये १५ देखि २० प्रतिशतसम्म निजी क्षेत्रका अस्पतालमा सेवा लिन जान्छन् । तर निजी क्षेत्रले उपचार गरेका ती बिरामीको तथ्याङ्क सरकारलाई दिँदैनन् । केन्द्रका प्रमुख सर्भिलेन्स अधिकृत अनिल थापा भन्छन्, “निजी अस्पतालले क्षयरोगको उपचार विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार गर्दैनन् । तर पनि बिरामी उपचारमा लिन गइराखेका छन् ।”
केन्द्रका निर्देशक चिकित्सक तिंकरीले क्षयरोगको २० महीना लामो उपचार अवधिलाई घटाएर ९–१२ महीनाको नमूना उपचार सेवा शुरु गरिएको जानकारी दिन्छन् । पहिलो चरणमा लागू भएको नमूना परीक्षण सफल भएपछि देशभरि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउनेछ । सरकारले क्षयरोग उपचार सेवा निःशुल्क बनाएको छ । उपचारमा सहजता ल्याउन बिरामीलाई रु तीन हजार यातायात खर्च समेत प्रदान गर्दै आएको छ । सात प्रदेशमध्ये गण्डकी प्रदेशमा क्षयरोग उपचारको सेवा अति प्रभावकारी रहेको छ ।
प्रदेश नं २ मा सबैभन्दा बढी क्षयरोगीका सङ्ख्या रहेका छन् । “क्षयरोगको उपचार हुन्छ, रोग नलुकाउन र निःशुल्क उपचार सेवामा आउन, हामी आग्रह गरिरहन्छौँ । तर बिरामी सेवा लिन किन आउँदैनन्, बुझ्नै गाह्रो भो”, निर्देशक चिकित्सक तिंकरी भन्छन् ।
केन्द्रले क्षयरोगसम्बन्धी स्थलगत अध्ययन कार्य ९प्रिभ्यालेन्स सर्वेक्षण० अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । नेपालमा पहिलोपटक ५५ जिल्लाका ९९ क्षेत्र (क्लष्टर) मा ५७ हजार ६१० व्यक्तिमा कागजविहीन प्रविधिमा आधारित भई गरिएको सो रोगको स्थलगत अध्यययनको ८० प्रतिशत काम पूरा भएको केन्द्रले जनाएको छ । सन् २०१७ बाट शुरु भएको सो सर्वेक्षण कार्यअन्तर्गत ६० हजारको खकार तथा छातीको परीक्षण स्थलगतरूपमा गरिनेछ ।
केन्द्रका प्रमुख सर्भिलेन्स अधिकृत थापा भन्छन्, “समाजले पछिल्लो समय क्षयरोगलाई सामाजिक रोगका रूपमा बुझ्न थालेको छ । क्षयरोग लागेका बालबालिकालाई विद्यालयमा अवरोध गर्ने, श्रम गर्न नदिने, क्षयरोग सर्ने नाममा वैवाहिक जीवनमा कलह हुनेलगायतका घटना अन्त्य भएको छैन । यो अन्त्य गर्न सामूहिक प्रयत्नको खाँचो छ ।”
अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा स्वीकृति
रुसी सर्वोच्च अदालतका अध्यक्ष नेपाल भ्रमणमा
जीप दुर्घटनामा चालकसहित १० जना घाइते
प्रहरी निरीक्षक सुरेन्द्रबहादर बमको नेतृत्वमा २५ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको गाँजा नष्ट
दुर्घटनामा परी भारतमा ९ को मृत्यु, १२ घाइते